अनावश्यक कलहरूको कारण समस्या भयो ? त्यसोभए यसरी कुनै पनि फोन नम्बर ब्लक गर्नुहोस् - Technology Khabar
» ताजा समाचार » अनावश्यक कलहरूको कारण समस्या भयो ? त्यसोभए यसरी कुनै पनि फोन नम्बर ब्लक गर्नुहोस्
अनावश्यक कलहरूको कारण समस्या भयो ? त्यसोभए यसरी कुनै पनि फोन नम्बर ब्लक गर्नुहोस्
धेरै चोटि हामीलाई अज्ञात नम्बरबाट बारम्बार कलहरू आउँदछन्। सुरुमा, हामी कललाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गर्ने गर्दछौं र अन्तिम नम्बर ब्लक गर्ने बाहेक अन्य विकल्प हुँदैन् । कहिलेकाँही परिस्थिति पनि खडा हुन्छ जब हामीले अरु कसैको सम्पर्क नम्बर पनि ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ।
आज हामी तपाईंलाई एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा नम्बर कसरी रोक्ने भनेर बताउन जाँदैछौं।
फोन नम्बर ब्लक गर्ने तरिका तपाईंको स्मार्टफोन कम्पनी र एन्ड्रोइड संस्करणमा निर्भर गर्दछ। धेरै फोनहरूमा नम्बर फोन एपको सेटिंग्समा रिसेन्ट कल्स वा कन्ट्याक्ट लिस्ट (भर्खरको कल वा सम्पर्क सूची)मा गएर रोक्न सकिन्छ।
कसरी फोन नम्बर ब्लक गर्ने यहाँ हेर्नुस्-
फोन एपबाट यसरी नम्बर ब्लक गर्नुस्
यसको लागि तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनको फोन एप(Phone app) खोल्नु पर्छ। त्यसभित्र रिसेन्ट कल्स वा कन्ट्याक्ट ट्याब(Recent Calls वा Contacts) मा जानुहोस् र थप विकल्प(More Options) मेनूमा ट्याप गर्नुहोस्। अधिक विकल्प मेनू प्रायः तीन थोप्लो आइकनको रूपमा हुन्छ। यहाँ, सेटिंग्स(Settings ) विकल्पमा जानुहोस् र ब्लक भएका नम्बरहरू (Blocked numbers)मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ संख्या थप्नुहोस् (Add A Number)भन्ने विकल्प देखा पर्नेछ, यसमा ब्लक गर्न चाहेको नम्बर हाल्नुहोस र ब्लक( Block)मा ट्याप गर्नुहोस्।
सम्पर्क सूची मार्फत नम्बरहरू कसरी ब्लक गर्ने
फोन एप खोल्नुहोस् र सम्पर्क ट्याबमा जानुहोस्। अब ब्लक गर्न चाहेको सम्पर्कको लागि खोजी गर्नुहोस्। तीन-डटहरूमा क्लिक गरेर सेटिंग्स खोल्नुहोस्। यहाँ तपाईं ब्लक नम्बरको विकल्प देख्नुहुनेछ। ब्लक गर्नका लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
सामसङ ग्यालेक्सी फोनमा नम्बर कसरी ब्लक गर्ने
सामसङले आफ्ना ग्यालेक्सी फोनहरुमा पनि यसको लागि विशेष सुबिधा दिएको छ । त्यसको लागि सामसङले ग्यालेक्सी फोनमा नम्बर ब्लक गर्न, फोन एप खोल्नुहोस् र रिसेन्ट (Recents) ट्याबमा जानुहोस्। अब तपाईँले यहाँ रोक्न चाहनुभएको नम्बरमा एक पटक छुनुहोस्। अब तल केहि अप्शनहरू बाहिर आउनेछन्। यसमा आई (‘i’) विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस्। यसले कल डिटेल्स खोल्दछ। तल तपाईंले ब्लकको विकल्प देख्नुहुनेछ। यसलाई ट्याप गरेर नम्बर ब्लक गर्नुहोस्।